Kugamuchirwa kuchitoro chedu chendaneti!
Mvura Yekuchengeta Tangi
Hove Kurima Tangi
Tangi Yemafuta Emafuta
Unoisa sei oxygen mutangi rehove?
na admin pa 21-11-27
Unoisa sei oxygen mutangi rehove? Pane nzira dzakati wandei dzekuita okisijeni tangi rehove. Nzira iri nyore ndeye kushandisa pombi yemhepo kana usiri kuishandisa. Kana pakaitika dambudziko, unogona kuita zvinotevera kuti uwedzere mweya weokisijeni mutangi rehove: 1. Dururira mvura yeaariyamu kubva paurefu kusvika ...
FRP (Fiber Reinforced Plastics) inoshandiswa muhove pond aquiculture
na admin pa 21-11-16
FRP (Fiber Reinforced Plastics) Advantage 1. Huremu huremu uye simba rakakwirira Huremu hwehukama huri pakati pe1.5 ne2.0, inongori 1/4 kusvika 1/5 yeiyo carbon steel, asi simba rekusimba riri pedyo kana kutopfuura. iyo yekabhoni simbi, uye iyo chaiyo simba inofananidzwa ne...
Dhizaini yepurazi rehove nebindu remuriwo
na admin pa 21-10-29
Dhizaini yedhizaini yeFarm Hove yaida kuti ive modular (yakafanana dhizaini, inodzokororwa), inovharika, inotakurika, inokwanisika uye ine pundutso. Mhinduro iri nyore yaive yekuvaka nhevedzano yematangi ehove, pombi nemasefa zvichibva zvasandura matangi kuita mapurazi ehove ane diki. Kushandisa mvura...
Mhando Dzakasiyana dzeMadziva eHove dzeKurima Hove muAquaculture
na admin pa 21-10-11
Kupfuya hove kunosanganisira kutorwa nekupfuwa kwehove dzemhando dzakasiyana dzemunhu kana dzekutengesa. Kana iwe uchida kuravira kwechikafu chegungwa uye uri kufunga nezvekuvaka yako wega purazi rehove, heano mamwe matipi ekuti ungavaka sei dziva rehove raunogona kutaura nezvaro. Muchikamu chino, ...
KUSVIKA KUTSVA Rodha mabhegi emvura ekuyedza
na admin pa 21-09-20
Nhanganyaya Mabhegi emvura ekuyedzwa akagadzirirwa kuyedza kuyera mutoro wemidziyo yekusimudza uye zvimiro zvinokumbira huremu hwekuyedza huremu kana huchangobva kupera, kana nguva nenguva kutarisa kana kugadzirisa. Zvakadai seye crane load kuyedza, danda rekuyedza kuyedzwa, davit mvura yekuyedza kuyerwa, derri ...
Kuita uye hunhu hweMota-yakaiswa Liquid Bag
na admin pa 21-08-04
Mota-yakaiswa Liquid Mabhegi anoshandiswa ane flatbed guardrail marori uye anorema marori anogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye saizi yerori. Iyo mota-yakaiswa flexitank haidi midziyo semadziro ekudzivirira ekufambisa kwemadhorobha, izvo zvinoderedza mutengo wekutakura ...
Pamusoro peGround Steel Frame Swimming pool
na admin pa 21-01-26
Panguva yekuyambuka masikati muzhizha iwe unongofanira kupedza imwe nguva uri mudhamu rekushambira. Mamwe emayadhi edu ane dziva rekutuhwina rekunze revakuru nevana: ndihwo hupenyu hwakanakisa hwekunakidzwa pazuva rinopisa. Nakidzwa nerunyararo uye kuzorora kwevhiki, kunakidzwa mudziva nevana vako, kuverenga...
Denderedzwa hove yekurima tangi inoita basa rakakosha muRAS system
na admin pa 20-11-19
Nekuvandudzwa kwemararamiro, kudiwa kuri kuwedzera kwehove nezvimwe zvekudya zvemugungwa, izvo zvakonzera kupararira kwehove dzemusango. Kubva muna 2016, zvinopfuura 50% zvehove zvegungwa zvakagadzirwa neaquaculture. Naizvozvo, yakakwira-density uye yakaderera-mutengo aquarium kurima kwakabuda, hove dziva ...
Aquaculture - kuwedzera kudiwa kunounza mikana mikuru
na admin pa 20-07-21
Indasitiri yezve aquaculture yave kuwedzera uye kubuda nekukurumidza. Nhasi, aquaculture inotora 50 muzana yehove dzinodyiwa pasi rose. Kuvimbika pane aquaculture inotarisirwa kuramba ichiwedzera, panguva dzinoverengeka mwero wekukura kweimwe kugadzirwa kwenyama. Uku kuvimba kuri kukura pakurima kwemumvura ...
Nyorera tsamba yedu kuti ugare uchiziva nezve kukwidziridzwa kwedu, zvideredzwa, kutengesa, uye zvakakosha zvinopihwa
Aquaculture - kuwedzera…
Flexible Storage Pillow Tangi
Kwete-Chepfu PVC Tarpaulin…
Kero:Kumabvazuva 380m kubva pamharadzano yeShuangfeng Road uye Wenhua Road, Xing'an District, Anqiu Guta, Weifang Guta, Shandong, China
© Copyright - 2010-2020 : Kodzero Dzose Dzakachengetedzwa.